Drafitra fitsangatsanganana: Aiza ny fifandonan'i Gen Z, Millennial ary Gen X ary aiza no mampifanaraka azy ireo?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Drafitra fitsangatsanganana: Aiza ny fifandonan'i Gen Z, Millennial ary Gen X ary aiza no mampifanaraka azy ireo?
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fandalinana ny dia dia manambara fifandonana sy fampifanarahana eo amin'ny Gen Z, Millennial ary Gen X.
Gen Z no taranaka mpihaza indrindra miaraka amin'ny antsasaky ny (51%) mikasa ny dia iraisam-pirenena sy ny 37% eto an-toerana.
Ny Gen X dia misalasala kokoa amin'ny 33% tsy nandeha tany amin'ny tanàna hafa tao anatin'ny herintaona.
Ny fiarovana dia mijanona ho tampon-tsaina hatrany amin'ny taranaka rehetra, miaraka amin'ny antsasaky ny valim-panontaniana isaky ny taranaka milaza fa izy ireo no miahiahy indrindra momba ny drafitry ny dia.
Ny fandinihana vaovao dia manambara fa ny dia amerikanina dia eo an-tampon'ny sain'ny tsirairay, na dia mizarazara be aza ny taranaka mifandimby amin'ny drafi-dia.
Misy singa sasany amin'ny fitsangatsanganana sy ny drafitra Gen Z, Millennial ary Gen X no miombon-kevitra amin'izany - ny olana ara-piarovana, ny fahasosorana amin'ny teti-bola ary ny faniriana hanao traikefa an-kalamanjana bebe kokoa.
Na izany aza, misy fisarahana eo amin'ireo vondrona ireo - hatraiza ny tadiavin'izy ireo alehany, fahita matetika amin'ny dia, teti-bola ary izay tian'izy ireo handaniany vola bebe kokoa amin'ny diany.
Rehefa miandrandra fitsangatsangana ireo Amerikanina, ny Millennial ary ny Gen X dia mijanona lavitra kokoa any an-trano raha toa ka mijery iraisam-pirenena ny Gen Z
Ny amerikana dia tao amin'ny quarantine miandry ny famerana ny fivezivezena mandritra ny andro ary afaka manomboka manomana fitsangatsanganana indray izy ireo.
Ny ankamaroan'ny mpamaly hatramin'ny taranaka fara mandimby (70%) dia nanomboka nanomana ny fialan-tsasatr'izy ireo, saingy miovaova ny toerana alehan'ny olona.
Ny tanàna iraisampirenena ho an'ny mpandeha eto Etazonia dia misy an'i San Juan, Dubai, Cyclades ary Paris.
Ny mpandeha Gen Z dia afaka manao ny ankamaroan'ny toerana tiany any ampitan-dranomasina miaraka amin'ny traikefa tsy hay hadinoina toy ny lakana bioluminescent bay sy ny fitsidihana lohataona any San Juan, safari efitra any Dubai, nosy volkano mitsangantsangana any Cyclades sy kilasy fanaovana mofo makarona frantsay any Paris.
Manakaiky ny antsasaky ny Arivo Taona (48%) ary mihoatra ny antsasaky ny Gen Xers (61%) no mikasa ny hijanona ao an-trano. 35% an'ny Millennial sy 20% an'ny Gen Xers no mitady handeha iraisam-pirenena.
Gen Z sy Millennial dia nanararaotra ny fampiakarana ny famerana ny dia - 37% ny Gen Zers ary 34% ny Millennial dia nankany amin'ny tanàna hafa tamin'ny volana lasa. Etsy ankilany, ny Gen X dia misalasala kokoa amin'ny 33% tsy nandeha tany amin'ny tanàna hafa tao anatin'ny herintaona.
Ny taranaka rehetra dia miandry fatratra ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina - laharana voalohany io, ambonin'ny tendrombohitra, tanàna ary ambanivohitra. Ireo torapasika irina any Miami sy San Diego dia mety ho nahatonga an'ireo toerana ireo tao amin'ny tanàna efatra amerikana ho an'ny Gen Z, Millennial ary Gen X.
Ankoatry ny morontsiraka, Gen Z sy Millennial dia faly ihany koa hijerena tanàna vaovao - ny toerana kasain'izy ireo hitsidika ao Etazonia dia misy New York City, Miami, Los Angeles ary San Diego.
Mikasa ny hamangy ny fitsidihana any New York City, Miami, San Diego ary Washington, DC ny Gen X
TSIA lehibe amin'ny fizahantany Kenya nataon'ny UNWTO: Tezitra i Afrika!
The Mitchells vs The Machines: Sarimihetsika fianakaviana vaovao tsara indrindra...
Fameperana Fizahantany Vaovao any UK? Mampaneno lakolosy fanairana ny WTTC